अत्यन्तै दुखको खबर ! डाक्टरले गरे दुई सन्तान र श्रीमती’को ह त्या, ओमिक्रोनको डर’ले ह’ त्या -
Home International अत्यन्तै दुखको खबर ! डाक्टरले गरे दुई सन्तान र श्रीमती’को ह त्या,...
एक डाक्टरले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमती’ को ह’ त्या गरे’का छन्। भारतको उत्तर प्रदेशको कानपुरमा यस्तो घ’टना घटे’को भारतीय सञ्चारमाध्यहरुले जनाएका छन्।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशील कुमारले आफ्ना दुई सन्तान र श्रीमती’को ह’ त्या गरे’का हु’न्। उनले ह” त्या’पश्चा’त आफ्ना भाइ’लाई प्र’हरी बोलाउन म्यासेज गरेको बताइएको छ। प्रहरी त्यहाँ पुग्दा डा. सुशील भने फ’रार भइसके’का थिए।
ओमिक्रोनका कारण तेस्रो लहर आउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न जनताको मनमा उठिरहेको छ । यसबारे भारत सरकारले ओमिक्रोन भारतलगायत अन्य देशमा फैलिन सक्ने बताएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरियन्टभन्दा पाँच गुणा बढी संक्रामक भएको बताइएको छ । त्यसैले सरकारले फेरि पनि पहिले जस्तै सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार डा. सुशीलले ४८ वर्षीय श्रीमती, १८ वर्षीय छोरा र १० वर्षकी छोरीको हत्या गरेका हुन्। प्रहरीका अनुसार डा. सुशील डिप्रेशनका बिरामी हुन्।
Previous articleकठै ! यस्तो हरिबिजोक ,डरलाग्दो ओढारमा यसरी रुदै भोकभोकै (हेर्नुस् भिडियो )
Next articleटिकटकमा पपुलर नेपालकी भेटेरिनरी डाक्टर को हुन् ? (भिडियो)
भाइरल सचिन र बखत पहिलोपटक मिडियामा ,सचिनले हसाएर मुर्छा पारे,यति मीठो गित सुनाए (हेर्नुस् भिडियो )